iOS 10 inowanikwa pa87% yezvigadzirwa zvine mwedzi kuti uende kusati kwaburitswa iOS 11 | IPhone nhau
iOS 10 inowanikwa pa 87% yemidziyo ine mwedzi kuenda kusvika kusunungurwa kweIOS 11
Yakave nguva yakareba kubvira patakataura nezve huwandu hwemaApple zvishandiso izvo zviripo zvino zvinotarisirwa neIOS 1o.x, yazvino vhezheni iyo Apple inopa kune vese vashandisi, kwasara chinguva chinopfuura mwedzi kuti vakomana kubva kuCupertino vatange kuvhura zviri pamutemo vhezheni yekupedzisira yeIOS 11, vhezheni irimo mubeta, zvese kune vanogadzira nevashandisi veveruzhinji beta chirongwa. Sezvatinogona kuona muApple Developer Center, iOS 10 inowanikwa mu87% yezvigadzirisiti zvinowirirana, iyo yakafanana muzana iyo iOS 9 yakasvika muna Nyamavhuvhu 15 yegore rapfuura.
Iyi dhata inopihwa neApple mune yekuvandudza portal inotiratidza sei iOS 9 ichiripo pane mamwe majaira, 10%, pamwe vese avo vakasara vegumi vhezheni yeIOS, pakati payo yatinowana iyo iPhone 4s, iyo iPad 2,3,4 uye iyo Mini Mini. Iyo 3% yasara kusvika 100% yakazara inotiratidza kuti kuchinei madivaysi eIOS ari kuita imwe vhezheni pamberi peIOS 9, zvishandiso zvinozotungamirwa neiyo iPhone 4, chishandiso chine vhezheni yekupedzisira yeIOS yaive yechinomwe.
Zvekare isu tinofanirwa kuenzanisa iyi yekugamuchira data neiyo Android ecosystem, iko parizvino chete 11% yezvigadzirwa zviripo pamusika zviri kunakirwa yazvino vhezheni yeApple 7, kugamuchirwa uko kwagara kuchisiya zvakanyanya kudikanwa asi kune avo vashandisi veiyi ecosystem vajaira uye makore apfuura kupatsanurwa kunofadza kwavanotambura kwakamira kukwevera kutarisa.
iOS 11 ichasiya avo vese vasina kugadzirisa zvishandiso zvisina kutarisirwa ne 64-bit processor, Saka iyo iPhone 5 uye iPhone 5c ichasiiwa kunze uye ichapedza iyo yasara yemazuva avo ehupenyu neIOS 10, vhezheni inoshanda senge chishongo, kuponesa madaro, pane izvi zvishandiso uye ndinotaura izvi kubva muchiitiko. Pamusoro peangu akajairwa iPhone 6s, yangu yechipiri foni ndeye iPhone 5, terminal iyo kusvikira nhasi ichiri kushanda zvizere nekuda kwebasa rakanaka rakaitwa naApple neazvino vhezheni yeIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » iOS 10 inowanikwa pa 87% yemidziyo ine mwedzi kuenda kusvika kusunungurwa kweIOS 11
Mhoroi, ndanga ndichiteera ino webhusaiti kwemakore, kunyanya nekuda kwenhau, pane runyerekupe, yaigara iri yangu huru gwara rekugadzirisa matambudziko, asi ikozvino pasina zvinogumbura, ndinofunga havasi ivo vanokwira kuita basa.
Pese pandaida kubatsirwa neJailbreak apa paive nemhinduro. Parizvino pane mamirioni ehuori uye malware anovimbisa iyo Jailbreak uye chokwadi ndechekuti handizive kuti ndivatendei.
Parizvino ndine IOS 10.3.3, ndinonzwisisa kuti haisati iripo, asi ndinoda kuti iwe utumire tsamba neruzivo rwakagadziridzwa, mune mamiriro api, kana yaburitswa, pane nzira dzekuzviita nhasi?
Ndinokutendai uye ndinovimba kuti nenguva munogona kundibatsira sezvamunogara muine, kwaziso.
Nehurombo munyika yepasirongo kune zvakawanda kushambadza kunozvipa asi iwo ari matsotsi chaiwo. MuActualidad iPhone tinoshuma dzese nhau dzinoitika mune izvi, asi kana pasina nhau hatigone kuzvigadzira. Kana iwe uine chero mibvunzo nezvazvo chero nguva, iwe unogona kutitumira isu email zvakananga kuve 100% chokwadi
Mhoroi, Adrian, kana iwe uri paIOS 10.3.3 zvirinani kurodha pasi kuIOS 10.3.2 asi Apple isati yavhara hwindo kuenda kuIOS 10.3.2, vanoti kuchave nekuputsika kwetirongo kubva 10.3.2 uye pasi, jailbreak yakatenderedza kona kubva pakona
Mhoro Adrian, kana iwe uri paIOS 10.3.3 iwe zvirinani kurodha pasi kuIOS 10.3.2 asi Apple isati yavhara hwindo kuenda kuIOS 10.3.2, vanoti kuchave nekuputsika kwejeri kubva 10.3.2 uye pasi, jailbreak iri kukona kubva pakona.
VSCO inotangisa maturusi ekugadzirisa vhidhiyo mushanduro yayo nyowani
Emoji Dambudziko, kuhwina mibairo yakawanda neEmoji iyo Movie app